GarsoorNews - Keebaa Mudan Abshir Bukhaari & Dhegdheer Hogaanka Golaha Aqalka Sare ee Somalia?
by Farah C/laahi | Tuesday, Jan 17, 2017 | 504 views
(Garsoor Online) — 21ka bishan Janaayo ayaa lagu balansan yahay in ay dhacdo Doorashada Gudoonka Golaha Duqeyda Soomaaliya (Golaha Aqalka Sare Soomaaliya), waxaana soo baxaya xubno dhawr ah oo u sharaxan Gudoomiyaha Golahaasi iyo Kuxigeenadiisa.
Sida uu sheegayo Awood qeybsiga ku dhisan qabiilka ee Soomaaliya, kursiga gudoonka Aqalka Sare ayaa waxaa ku tartami kara oo kali ah musharaxiinta ka soo jeeda beelaha Dir, gaar ahaa kuwa Somaliland dega.
Kursiga Kuxigeenka 1aad ee Golaha Duqeyda Soomaaliya ayaa loo Asteeyay in ay ku tartaman musharaxiinta ka soo jeeda Beesha Hawiye, waxaana hada la hadal hayaa dhawr siyaasi oo kursigaasi u hanqal taagaya.
Loolanka ugu adag ee doorashada Aqalka sare ayaa la filayaa in ay noqoto Kursiga Kuxigeenka 1aad ee Golaha Duqeyda Soomaaliya, iyadoo ay tartankaasi isku hayaan siyaasiyiin ka soo jeeda Beesha Hawiye.
Labada Senator ee ugu cadcad musharaxiinta u taagan qabashada kursiga kuxigeenka 1aad ee Golaha Duqeyda Soomaaliya waxa ay kala yihiin Senator Abshir Axmed Maxamed (Bukhaari ) iyo Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dheg-dheer oo labadaba laga soo doortay Gobolada Galmudug.
Hadaba, Waa kuma Senator Abshir Axmed Maxamed (Bukhaari)?
Waa siyaasi muddo dheer ku soo dhex jiray siyaasada Soomaaliya, isagoo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Federaalka Soomaaliya.
Siyaasada ka hor Abshir Bukhaari waxa uu si weyn uga soo shaqeeyay Adeegyada Bulshada, isagoo kamid ah dadkii fara ku tiriska ah ee ka shaqeeyay dib u soo nooleynta tacliinta Soomaliya.
Sidoo kale Mudane Abshir Axmed Maxamed (Bukhaari) ayaa soo noqday Agaasimihii Madaxtooyada Soomaaliya, waxana uu shaqo badan ka qabtay Hanaanka Maamul ee Villa Somalia oo aan 25 sano dowlad ka talin.
Waxa uu ku guuleystay in uu soo celiyay Maqaamka Madaxtooyada sida uu dib u soo nooleeyay Nidaamka maamul iyo dib u howlgalinta waaxaha Villa Somalia, taas oo mida fududeysan shaqada xiligan ka socota Madaxtooyada Soomaaliya.
Waxa uu Noqday qofkii ugu horeeyay ee noqda Senator Soomaaliyeed waxana uu ku soo baxay doorasho si xur ah uga dhacday Magalada Cadaado, halkaasi oo ay codka kalsoonida ku siiyeen Xubnaha Golaha Deegaanka ee Galmudug.
Senator Abshir Axmed Maxamed (Bukhaari) ayaa noqday Mudanaha kaliya ee dib u jaleecay shacabka ku dhaqan deegaankii laga soo doortay.
Mudane Abshir Bukhaari ayaa ku dhawaad 100 qoys oo barakacayaal ah u qaybiyay Agab noloshooda Aas-aas u ahaa oo ay ka mid yihiin Raashiin, Baco laga galo qabowga iyo kuleelka cad-ceeda, taasi oo noloshooda kobcisay.
Intaa kuma ekaan Senator Abshir Axmed Maxmed ee wa uu sii laba jibaaray shaqadiisa, isagoo ku guuleystay sameeynta Iskuul wax lagu baro caruurta dadka masaakiinta ah ee aan awoodin in bixiyaan qarashaadka wax lagu baro caruurta.
Iskuulka waaxaa hadda ku naaloonaya caruur aad u fara badan oo iskugu jiro barakacaayl iyo dadka deegaanka oo ku dhaqan Magaalda Cadaado ee gobolka Galgaduud.
Waa siyaasiga kali ah ee sameystay xafiis uu ugu adeego Bulshada Soomaaliyeed marka la fiiyo xildhibaanada labada Aqal ee Soomaaliya, waana Senator-kii u horeeyay talabadaa qaaday, si shacabka uu xariir joogto ah ula lahado.
Waa Kuma Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dheg-dheer?
Waa siyaasi muddo ku soo jiray Baarlamaanadii hore ee ku meel gaarka ah iyo midkii 9aad ee dhawaan muda xileedkiisu dhamaaday, waxaa si aad ah loogu xasuusta ka shaqayntii in booska laga wareejiyo Ra’isal wasaare Abdiweli Sheikh Maxamed.
Xildhibaan Dhag-dheer ayaa ahaa caqligii ka danbeeyay ridida xukuumadaas isaga oo xiligaa mas’uul uga ahaa Madaxwayne Soomaaliya.
Ma jirto wax taageero ah oo uu sameeyay shacabka kursi ahaan uu matalayo marka laga fiiriyo dhinac walba oo ay ahaato, hadii ay ahaan lahayd hormarinada deegaaneed iyo midda nololeed.
Xildhibaan Dhag-Dheer ayaa doorashadiisi ka dib ee Golaha Duqeyda Soomaaliya noqday xubin aad uga ag dhaw Shariif Xasan isagoo siyaasad ahaan ka leexday Madaxweynaha hada talada haya.
Ugu danbeyn hadii ay jirto cid garanaysa wax qabad uu sameeyay Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dheg-dheer fariin ha inoo reebto.
Daawo Sawirro Muujinayo Deegaanka Garacad ee gobolka Mudug